सुरक्षाको अनुभुति भएमा मात्र हामी विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी विदेश पठाउँछौँ : हिमालयन वल्र्ड वाइड एडुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रबन्धक निर्देशक रोशनी श्रेष्ठ - Shiksha Sansar
प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार June 1, 2019
काठमाडौँ । विगत दुई वर्षदेखी विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको विभिन्न विदेशमा पठाएर विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरलाई विकास गर्न निरन्तर लागीरहेको नयाँ बानेश्वरमा रहेका हिमालयन वल्र्ड वाइड एडुकेशन कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी कसरी विदेश पठाइरहेको विदश पढ्न गएका विद्यार्थी सुरक्षित छन वा छैनन् । विद्यार्थीहरुलाई कुन कुन विषय पढ्नका लागी विद्याथीहरुलाई विदेश पठाउँनुहुन्छ लगाएत विषयमा रहेर कन्सल्टेन्सी प्रमुख प्रबन्धक निर्देशक रोशनी श्रेष्ठसँग शिक्षा संसारका संवाददाताले गरेको कुराकानीको साराशं
तपाईको कन्सल्टेन्सी स्थापना भएको कति भयो ?
हाम्रो कन्सल्टेन्सी सन् २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । हामी दुई वर्ष देखी यस संस्थामा निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौँ ।
विद्यार्थीलाई पढ्नको लागी कुन कुन देशमा पठाउँनुहुन्छ ?
विदेश पढ्नको लागी हामीले विद्याथीहरुलाई अमेरिका, क्यानडा, न्युजरल्यान्ड जर्मन अस्ट्रेलिया लगाए र पछिल्लो समय भारतमा पनि पठाउन सुरु गरेका छौ । धेरै विद्यार्थीको रोजाईमा रहेका देश अस्ट्रेलिया छ । विषेश गरी हामीले अस्ट्रेलियालाई बढि प्राथमिकतामा राखेर विद्यार्थीहरु विदेश पठाउने गरेका छौँ ।
विद्यार्थीहरुलाई कुन कुन विषय पढ्नको लागी विदेश पठाउँनुहुन्छ ?
इन्जिनेरिङ, एकाउन्टिङ, नर्सिङ,आइटी,व्यबस्थापन,साइन्स यी विषय पढ्नको लागी धेरै विद्यार्थीहरु विदेश जाने गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरुलाई विदेश पढ्न पठाउँदा के कस्ता चुनौतीहरु छन् ?
त्यस्तो चुनौतीहरु भन्ने त छैनन् । सहि कलेज र सहि विश्वविद्यालयहरु छानेर विद्यार्थीहरुलाई पठाउनुपर्छ त्यस्तो केही समस्याहरु पर्दैन । हामीले विद्यार्थीहरुका परिवारलाई उनका छोरा छोरी कलेज विश्वविद्यालय के मा जाँदैनछन् त्यसको जानकारी हामीले पहिले नै गराएका हुन्छौँ ।
पढ्नको लागी शुल्क कति र्तिनुपर्छ, त्यहाँ गएर के के गर्न सकिन्छ । हप्ताको २० घण्टा भन्दा बढि काम गर्न पाउदैन् । त्यहाँको पैसामा मात्रै भरपर्नु हुदैन अपुग भएमा नेपालबाट पनि पैसा पठाउनुपर्छ लगाएत सबै कुराको जानकारी हामीले विद्यार्थी भिषा प्रोसेसमा आउनुभन्दा पहिले नै परिवारलाई जानकारी दिएर मात्र अघि बढ्ने गछौँ ।
यी सबै कुरा विद्यार्थी र उनका परिवार स्पष्ट भएपछि मात्र हामीले उनीहरुलाई अरु कामको लागी अगाडि बढ्न आग्रह गछौँ ।
विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी पठाउने कलेज तथा विश्व विद्यालयहरुमा आफै गएर
त्यहाको बारेमा जानकारी लिनुहुन्छ कि हुन्न ?
मैले आफैले विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी पठाउने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु त्यहाँ जानुभन्दा अघि गएर त्यहाँको बारेमा बुझेर त्यहाका सबै कुराको जानकारी लिएर मात्र आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई त्यस पछि मात्र पठाउने गरेको छु । उदाहरणको लागी हामीले कुनै नयाँ विश्वविद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थीहरु पठाउने भयौँ भने त्यहाँ सर्वपप्रथ पहिला म आफैँ जान्छु, विश्वविद्यालय तथा कलेज कस्तो छ हेर्छु र त्यहाँ विद्यार्थी मैत्री वातावरण छ विद्यार्थीहरुको लागी सुरक्षा व्यबस्था कस्तो छ त्यहाँका नियम कानुनको बारेमा जानकारी लिन्छु र सबै कुरा सहि छ भने मात्र अनि हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी पठाँउछु ।
त्यही भएर पनि हामी अन्य कन्सल्टेन्सी भन्दा अलि फरक छौँ । विद्यार्थीको विषा लागेपछि उनीहरु जानुभन्दा पहिला म अस्ट्रेलिया गैसकेको हुन्छु । किन कि सबै विद्यार्थीहरुको त्यहाँ आफन्त हँुदैनन्, सबै कलेजहरुमा होस्टेलका व्यबस्था पनि हँुदैन । त्यसैले उनीहरु त्यहाँ गएपछि कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने अन्योलमा नपरुन भनेर म आफै गएर उनीहरुलाई व्यबस्थीत बनाएर मात्र नेपाल फर्कन्छु । यतिमात्र नभएर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा विद्यार्थी पढ्न पठाउनुपर्यो भने पनि हामीले त्यहाँ गएर बुझेर सहि भए मात्र विद्यार्थीहरुलाई विदेश पढ्नको लागी पठाउँछौँ ।
यस कन्सल्टेन्सी बाट विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी कत्तिको सुरक्षित छन् ?
हामीले विद्यार्थीहरुलाई धेरै पठाउँने भनेको अस्ट्रेलियाको हक मा हाम्रा विद्यार्थीहरु एक दमै सुरक्षित छन् भने अन्ने देशमा हामीले विद्यार्थीहरुलाई हत्तपत्त पठाँउदैनौ यदि पठाउँनु परेमा पनि हामी सुरक्षाको अनुभुति भएमा मात्र विद्यार्थीहरुलाई पठाउँछौँ ।
अस्ट्रेलिया सुरक्षित देश हो तर कहिले काँही विद्यार्थीहरुको कारणले असुरक्षाको समस्या आउन सक्छ तर हामीलाई अहिले सम्मन त्यस्तो समस्या भने आएको छैन् विद्यार्थीहरु त्यहाँको कानुन भित्र रहेर बसे कम गरे भने असुरक्षित भन्ने हुदैँन तर विद्यार्थी होस्टेल तथा कलेजबा भागेर गयो भने त्यस्तो समस्या आउन सक्छ । तर हाम्रा विद्यार्थीले अहिले सम्मन त्यस्ता काम पनि गरेका छैनन् र हामीले त्यस्तो समस्या पनि भोग्नु पनि परेको छैन् ।
विदेश पढ्न जानको लागी प्रक्रिया के छ ?
पहिला हामी उनीहरुको स्कोर हेर्छौ, उनीहरुको स्कोर ठिक छने उनीहरुले अस्ट्रेलिया जानको लागी आयल्स गनुपर्छ । आएल्सटिएसमा पनि आवश्यक स्कोर्ष ल्याउनुपर्यो । त्यपछि हामीले काउन्सीलिङ गर्दा उनीहरुको पारिवारिक आर्थिक अबस्था कस्तो छ । शैक्षिक ऋण तथा बैंक व्यालेन्स देखाउनुपर्छ भनेको हुन्छ । ती सबै कुरा भएमा मात्र हामी अरु प्रोसेस अगाडि बढाँउछौँ ।
किन यस कन्सल्टेन्सीबाट नै पढ्नको लागी विदेश जाने ? अरु भन्दा तपाईहरु के मा परक हुनुहुन्छ ?
आएल्स पढाँदा अन्य कन्सल्टेन्सीले एउटै कक्षामा ३०र ४० जना राखेर पढाँउछन् तर हामी १० जना मात्रै राखेर पठाँउछौँ । किन कि विद्याथीले शिक्षक चिन्ने होईन शिक्षकले विद्यार्थी चिन्नुपर्छ । हामील विद्यार्थीहरुलाई ट्युसन कक्षा जसरी घोटाइ घोटाई पढाँछौँ । अर्को कुरा हाम्रो अस्ट्रेलियामा पनि कार्यालय छ । त्यहाँ विद्याथीहरुलाई समस्या पर्यो भने उनीहरुलाई हामी आफै हेर्छौँ ।
यी कारणहरुले पनि हामी अरु भन्दा फरक छौँ । मैले काम गरेको कन्सल्टेन्सीको अनुभव पनि हो । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुमा के गरी रहेका हुन्छन् भन्दा एउटाले गायिट लाइन गर्छ, अर्कोले काउन्सीलिङ गर्छ र अर्कोले अन्तरवार्ता लिन्छ, यसरी काम गर्दा कुराकानीमा अन्तर आउँछ त्यसले गर्दा कुराहरु फेरीन पनि सक्छ तर हाम्रो त्यस्तो हुदैँन जसले काउन्सीलिङ गर्छ उसैले नै भिषा सम्मन पुर्याउने काम गर्छौ यो कुरामा पनि हामी अन्य भन्दा फरक छौँ ।
अन्त्यमा, मैले सोध्न छुटेको वा तपाईले भन्न चाहेको केही छ कि ?
कन्सल्टेन्सी चलाएर मात्रै हुदैन् । कन्सल्टेन्सीका ओनरहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरु चिन्नुपर्छ कति कन्सल्टेन्सीका ओनरहरुले आफ्नो विद्याथीहरुलाई चिन्दैनन् । हाम्रो काम पढाउने मात्रै हैनन् त्यहाँ गएर व्यबस्थीत बनाउने पनि हो । धेरै विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलियामा हरिविजोग भएको मैले नै देखेको पनि छु ।
भिषा लाग्ने वित्तिकै विद्यार्थी प्रतिको जिम्मेवारी सकिदैन । विद्यार्थी पठाए वापत त हामीले कमिसन लिएका छौँ । त्यसैले हामीहरुले विद्यार्थीको व्यबस्थापन लगाएत सबै कुराहरुको व्यबस्थापन कन्सल्टेन्सीहरुले नै गनुपर्छ ।